तारे होटलको आम्दानी लुम्बिनीको विकासमा खर्चिने जापानीको घोषणा « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
« कपिलबस्तु दिवस विश्व अभियान स्पेन राष्ट्रिय समितिको जरुरी सूचना
Lumbini, birthplace of the Buddha, struggles with identity »
होइन । मलाई नेपालबाट पैसा कमाएर लैजानु पनि छैन । उनले यो होटल आफ्नोतर्फबाट लुम्बिनी र स्थानीय बासिन्दाका लागि उपहारका रूपमा रहने बताए । ४० वर्ष उमेरको छँदा तीन-चार वर्षसम्म मुटुको बिरामी भएर जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका बेला बाँचेको खण्डमा लुम्बिनीमा केही गर्ने संकल्प गरेको कासाईले बताए । ‘त्यही संकल्प पूरा गर्न होटल बनाएको हुँ,’ उनले भने ।
कासाई जापानमा रियलस्टेटको कारोबार गर्ने धनाढ्य व्यवसायी हुन् । जापानमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने दस हजार व्यक्तिमध्येका कासाई एक भएको उनलाई जापान छँदैदेखि नजिकबाट चिन्ने स्थानीय डा. तारा सापकोटाले बताए । कानुनमा वातावरणसम्बन्धी विद्यावारिधि गर्न जापानको नागोया विश्वविद्यालयमा रहेका सापकोटासँग कासाईको भेट भएको थियो । त्यसपछि उनी नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भएका थिए ।
लुम्बिनीमा होटल सञ्चालनका निम्ति कासाईले सुरुदेखि १ अर्ब १ करोड येन -करिब ३६ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । ‘होटलले निरन्तरता पाओस् भन्ने उनको चाहना छ,’ सापकोटाले भने, ‘यसका कामदारलाई समेत उनी सन्तुष्ट राख्न चाहन्छन् । त्यसका लागि कासाईले व्यक्तिगत धेरै सम्पत्ति बेचेर नेपाल ल्याएका छन् ।
This entry was posted on November 6, 2010 at 9:45 am	and is filed under रोचक जानकारी, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.